Maitiro ekugadzirisa kupatsanurwa zip faira? - DataNumen
Kugadzirisa kupatsanurwa zip faira (fungidzira iro zita refaira iri 'mysplit.zip'), ndokumbirawo uite zvinotevera:
1. Download DataNumen File Splitter uye ishe pacomputer yako.
3. Dzvanya bhatani "Join".
4. Mune iyo "Join" dialog, sarudza ese akapatsanurwa mafaera uye wedzera iwo kune sosi faira runyorwa.
5. Ita shuwa kuti marongero ezvikamu zviri mune irondedzero akafanana neakarongeka epakutanga, ndokuti, mysplit.z01 ndiyo yekutanga uye mysplit.z1 ndiyo yechipiri, nezvimwe uye mysplit.zip ndiyo yekupedzisira.
Shandisa bhatani "Simudzira Kumusoro" uye "Enda Pasi" kugadzirisa iwo marongero kana zvichidikanwa. Kana chikamu chimwe chikapotsa kana chakaora, ipapo unogona kungochisiya, asi iwe uchiri kufanira kuchengetedza hurongwa hwavo. Semuenzaniso, kana chikamu chechipiri chikashaikwa, saka ingo ita shuwa kuti zvikamu zvacho mune runyorwa mysplit.z2, mysplit.z01,…, mysplit.zip.
6. Gadza zita refaira rekuenda, senge mysplit_merged.zip
7. Dzvanya “Start Join ”kujoinha zvikamu munzvimbo yekuenda faira mysplit_merged.zip.
8. Mushure mekunge maitiro ekubatanidza apedzwa, unogona start DataNumen Zip Repair uye gadzirisa mysplit_merged.zip senguva dzose zip faira. Iyo yakagadziriswa faira ichave iine data rezvikamu zvese zvekupatsanurwa Zip faira. Unogona kuvhura neakakurumbira Zip zvinoshandiswa, zvakadai saWinZip, WinRAR, Etc.
Join, zip faira